23 Pinterest Statistics ee Muhiimka u ah Suuqgeeyayaasha 2021 | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/23 Pinterest Tirokoobyada Muhiimka u ah Suuqgeeyayaasha 2021
23 Pinterest Tirokoobyada Muhiimka u ah Suuqgeeyayaasha 2021
Tirakoobka Pinterest waa qayb muhiim ah oo ka mid ah xeeladaha suuq-geyneed ee gudaha iyo dibaddaba. Marka la eego, waxay ka caawiyaan suuq-geynta inay fahmaan dhagaystayaasha Pinterest oo ay aqoonsadaan waxa isbeddelaya.
Tirakoobka warbaahinta bulshada ayaa si weyn loo wadaagaa wareegyada suuq-geynta ee khadka tooska ah. Laakin ma aha in xaalad kastaa khusayso, la isku halayn karo oo la cusbooneysiiyay. Waxaan soo koobnay Pinterest stats taas oo ku saleysan xogtii ugu dambeysay ee si toos ah looga soo xigtay isha.
Bonus: Soo deji hage bilaash ah taasi waxay ku baraysaa sida lacag looga sameeyo Pinterest lix tillaabo oo fudud iyadoo la isticmaalayo qalabkii aad hore u haysatay.
Tirooyinka guud ee Pinterest
Fiiri sida xisaabaadka Pinterest ay uga cabbiraan shabakadaha kale ee warbaahinta bulshada iyo wixii ka dambeeya.
1. Pinterest waa Shabakadda bulshada ee 14-aad ee ugu weyn aduunka
Laga bilaabo Janaayo 2021, Pinterest waxay ku jirtaa kaalinta 14-aad ee ugu weyn adduunka marka loo eego isticmaalayaasha firfircoon ee caalamiga ah.
Madalku wuxuu ka hooseeyaa shabakadaha bulshada sida Facebook, Instagram, TikTok iyo Snapchat - laakiin ka hor Twitter.
Source: Gobolka Caalamiga ah ee Dijital ah 2021
2. Madal hadda waxay leedahay 459 milyan isticmaalayaasha firfircoon bishiiba
Pinterest waxay heshay in ka badan 100 milyan isticmaalayaasha firfircoon bishiiba 2020. Taasi waa kororka ugu weyn ee madal la arko. Qulqulka Pinners wuxuu horseeday kor u kaca 37% isticmaalayaasha firfircoon ee billaha ah inta u dhaxaysa 2019 iyo 2020.
3. Tirooyinka isticmaaleyaasha caalamiga ah ee billaha ah ayaa kordhay 46% sanadka 2020
Pinterest's Q4 2020 Warbixinta Shareholder waxay muujinaysaa in qayb wayn oo ka mid ah kobaca shirkadu ay ka dhacday meel ka baxsan Maraykanka. Isticmaalayaasha firfircoon ee bilaha ah ee caalamiga ah ayaa kor u kacay 361 milyan sanadka 2020. Taasi waa koror 46% ah sanadkii hore.
Dalka Mareykanka, 98 milyan oo qof ayaa bishiiba si firfircoon uga shaqeynayay Pinterest sanadka 2020, taasoo ka dhigan koror 11%.
4. Dakhliga caalamiga ah in ka badan labanlaabmay Q4 2020
Marka lagu daro kobaca isticmaalaha caalamiga ah, Pinterest waxay heshay qadar aad u weyn oo xayaysiis ah suuqyada caalamiga ah - "gaar ahaan Galbeedka Yurub," ayay shirkaddu ku sheegtay warqad ay u dirtay saamilayda.
Rubuci afaraad ee 2020, shirkaddu waxay heshay $123 milyan dakhli caalami ah, marka la barbar dhigo $50 milyan Q4 2019.
"Oo halkan hadda ayaan ka bilaabaynaa," ayaa lagu yiri warqadda. "Waxaan qorsheyneynaa inaan ballaarino joogitaankayaga suuqyada caalamiga ah ee hadda jira, waxaanan ku faraxsanahay inaan galno juqraafiyada cusub ee Latin America qeybta hore ee ."
5. Pinterest's 10-xubnood oo golaha maamulka ah hadda waxaa ku jira 2 dumar ah oo midab leh
Warbixintii ugu dambeysay ee kala duwanaanshaha shirkadu waxay muujineysaa in sanadka 2019, shaqaalaha Madowga ah ay matalayeen kaliya 4% guud ahaan shaqada Pinterest iyo kaliya 1% doorarka hogaaminta.
Guud ahaan, haweenku waxay matalayeen 47% shaqaalaha, kaliya 25% ee jagooyinka fulinta iyo 80% ee doorarka layliga.
Pinterest ayaa dhaleecayn kala kulmay takoorka jinsiga iyo jinsiyadda sannadkii hore. Juun 2020, Guddi Gaar ah oo madaxbannaan ayaa la aasaasay si ay u eegaan dhaqanka goobta shaqada ee shirkadda. Talooyinka guddiga ayaa la daabacay bishii Diseembar, iyadoo isbedelada qaar horey loo fuliyay. Shirkaddu waxay sidoo kale samaysay dhowr magacaabis oo dumar midab leh oo dhowaan loo magacaabay guddiga agaasimayaasha, kooxda fulinta iyo jagooyinka kale ee hogaaminta.
Pinterest waxa ay ballan qaaday in ay hubiso in 50% "abuurayaasha la maareeyey" ee ay la shaqeyso ay ka yimaaddaan kooxo aan la soo koobin. Shirkaddu waxa kale oo ay ku dartay hab ay tafaariiqleyaasha, xayaysiiyayaasha iyo hal-abuurayaashu isku aqoonsadaan, taas oo u oggolaanaysa shirkadu in ay ku soo bandhigto waxyaabaha ay ka kooban yihiin tab Maanta, Shopping Spotlights iyo Dukaanka Pinterest.
Adeegso xisaabaadka isticmaalaha Pinterest si aad u fahanto dhaq dhaqaaqa dadwaynaha ee goobta.
6. 60% dumarka, kala qaybsanaanta jinsiga ee Pinterest ayaa laga yaabaa inay sii yaraato
Dumarku had iyo jeer way ka sarreeyaan ragga Pinterest. Laakiin barta blog-ka ee dhawaan, madaxa suuqgeynta ganacsiga ee caalamiga ah ee shirkadda ayaa u aqoonsan ragga inay yihiin mid ka mid ah madal-samaynta tirakoobka ugu kobcaya. Sannadkii 2020, tirada ragga Pinners ayaa kordhay ku dhawaad ​​50%.
Marka ay timaado dhagaystayaashooda xayaysiinta, burburka jinsiga ayaa u muuqda mid ka duwan. Laga bilaabo Janaayo 2021, Pinterest's qalabyada xayeysiiska ee is-adeegga ayaa u aqoonsaday dhagaystayaasha dheddigga ah 77.1%, dhagaystayaasha ragga ah 14.5% inta soo hartayna waxaan la cayimin.
2019, Pinterest waxay aqoonsatay 4,000% korodhka raadinta agagaarka kala guurka jinsiga.
7. Tirada isticmaalayaasha Gen Z ayaa kordhay 40% intii u dhaxaysay 2019 iyo 2020
Marka la eego tirakoobka jiilka, Pinterest waxay aragtay kobaca ugu badan sanadkii hore Gen Z. Markaa waxaa laga yaabaa inaysan wax kharash ah ku bixin. oo dhan waqtigooda TikTok.
Sida laga soo xigtay Xarunta Cilmi-baarista ee Pew, qof kasta oo dhashay 1997 ka dib waxaa loo tixgeliyaa qayb ka mid ah jiilkan.
Tirada kun-sano ee Pinners (qof kasta oo dhashay intii u dhaxaysay 1981 iyo 1996) wuxuu kordhay 35% sanadka 2020.
8. Haweenka da'doodu u dhaxayso 25-34 waxay matalaan 30.4% ee dhagaystayaasha xayaysiiska Pinterest
Dumarku way ka sarreeyaan ragga iyo isticmaalayaasha aan binary ahayn koox kasta oo da 'kasta ah, laakiin waxay si gaar ah uga muuqataa 25 ilaa 34. Natiijooyinka ka soo baxay qalabka xayeysiiska ee iskood u adeega ee Pinterest ayaa sidoo kale muujinaya in Pinterest demographics ay da'yaraan, gaar ahaan haweenka.
Tirakoobka isticmaalka Pinterest
Ogaanshaha waxa sameeya pinner pinner inta badan waa waxa ka sooca istaraatijiyad suuqgeyneed oo wanaagsan iyo mid dhexdhexaad ah. Haddii aad raadinayso taageerayaal badan ama iib, kuwan Pinterest stats waa inay hagaan dadaalkaaga.
9. 82% dadka u isticmaal Pinterest mobilka
Tiradan ayaa wax yar hoos uga dhacday 85% sannadkii hore. Si kastaba ha ahaatee, tirada isticmaaleyaasha mobilada ee madalku waxa ay ka sarreeyeen 80% ilaa ugu yaraan 2018.
10. Dadku meel dhow bay ka daawadaan hal bilyan fiidiyowyada maalinlaha ah ee Pinterest
Qof kastaa kuma xidhna Pinterest muuqaalka, laakiin waxa uu ahaa mid toosan oo koraya goobta. Si loo taageero kobaca, shirkaddu waxay dhawaan soo bandhigtay xirmooyinka xayeysiiska ee Pinterest Premiere, kuwaas oo loo dejiyay inay xoojiyaan beegsiga iyo gaaritaanka ololayaasha fiidiyowga.
11. 95% Raadinta ugu sareysa ee Pinterest waa mid aan sumad lahayn
Maxay tani muhiim u tahay? Waxay ka dhigan tahay in Pinners ay u furan yihiin inay ogaadaan badeecado iyo fikrado cusub. Ku dhawaad ​​9 ka mid ah 10kii qofba waxay u isticmaalaan Pinterest si ay wax u iibsadaan, iyo 98% dadka ay shirkadu ra'yi dhiibtay waxay sheegeen inay isku dayaan waxyaabo cusub iyagoo ku salaynaya waxay helaan.
12. 85% ee Pinners waxay sheegeen inay u isticmaalaan Pinterest si ay u qorsheeyaan mashaariic cusub
Iyadoo dadku siyaabo kala duwan u isticmaalaan Pinterest, boqolkiiba wax ku ool ah ee Pinners ayaa ah qorshayaasha. Badanaa, dadku waxay yimaadaan goobta marka ay ku jiraan marxaladaha hore ee mashruuca ama go'aanka iibsashada.
13. Tirada looxyada la abuuray ayaa kordhay 35% in 2020
Isticmaalayaasha Pinterest waxay si gaar ah ugu mashquulsanaayeen qorsheynta 2020, Pinterestna waxay leedahay looxyada si ay u caddeeyaan.
Waa maxay noocyada looxyada ay dadku abuurayeen? Waxaa kordhay 95% looxyada moodada dumarka, 44% kor u qaadista quruxda iyo 36% kor u qaadista qurxinta guriga. Intii u dhaxaysay Juun iyo Diseembar 2020, Pinterest waxay jaantustay waxa ay ku tilmaantay "kor u kac taariikhi ah" oo looxyada alaabta ilmaha.
Qaar ka mid ah isbeddellada cusub ayaa sidoo kale kor u kacay. Looxyada "nololeedka riyada" waxay noqdeen saddex jeer in ka badan oo ku baahday goobta, oo ay weheliso kor u kaca jimicsiga guriga iyo qorsheynta mashruuca.
14. Qorshaynta fasaxu waxa ay bilaabataa 9 bilood ka hor
Christmas ee Luulyo? On Pinterest, qorshaynta kirismaska ​​​​waxay bilaabataa horaanta Abriil.
Raadinta "fikradaha hadiyadaha kirismaska" ayaa saddex jeer ka sarreeyay sannadkii hore ee Abriil 2020. "Fikradaha qurxinta kirismaska", "filimaanta kirismaska", " cookies kirismaska ​​"iyo" ubaxyada kirismaska ​​" ayaa ka mid ahaa ereyada raadinta ugu sarreeya ee madal intii u dhaxaysay Juun iyo Disembar .
Xiliga ayaa muhiim u ah Pinterest. Sida laga soo xigtay xogta Pinterest, biinanka leh nuxurka "gaar ah nolol xilliyeed ama daqiiqado maalinle ah" waxay kaxeeyaan 10 jeer wacyiga kaalmada sare iyo 22% iibinta khadka tooska ah.
15. 8 ee 10 Isticmaalayaasha Pinterest waxay yiraahdaan madalku waxay ka dhigeysaa inay dareemaan wanaag
Pinterest waxa ay samaysay horumaro dhanka togan ah halka aaladaha kale ay ku fashilmeen. Dhab ahaantii, sahanka Subaxda iyo Pinterest, 90% dadka ra'yiururinta ayaa aad u fogaaday ilaa ay ugu yeeraan Pinterest "oasis online ah." Sababta ay dadku sidan u dareemi karaan ayaa ah in shirkadu mamnuucday xayaysiisyada siyaasadeed sanadka 2018.
Pinterest sidoo kale waxay u qaddarisaa dhexdhexaadinta nuxurka inay tahay micneheedu inay diidmada ka ilaaliso goobta. "Haddii warbaahinta bulshadu ay ina bareen hal shay, waa in waxyaabaha aan la sifeynin ay horseedaan diidmo," ayay tiri warbixin shirkadeed. "Iyadoo aan la helin dhexdhexaadin ula kac ah, aaladaha lagu dhisay isku xirka dadka ayaa -- dhamaadka - kaliya ka dhigay iyaga."
Qiimaynta suuqgeynta Pinterest
Pinterest waa xuduud naadir ah oo dhanka internetka ah halkaas oo dadku u furan yihiin waxyaabaha summadaysan. Baro sida suuqgeynayaasha kale ay guul uga heleen abka abka tirooyinkan Pinterest.
16. Xayeysiyeyaashu waxay gaari karaan in ka badan 200 milyan oo qof Pinterest
Isbeddelka rubuci-ka-dhaafka ah ee Pinterest ee gaadhay xayaysiinta ayaa kor u kacday 6.2% waxayna u badan tahay inay sii wadi doonto kor u kaca sanadka. Qayb ka mid ah kororka waa natiijada Pinterest oo ku dartay dalal badan xayeysiiskeeda bartilmaameedka ah.
Weli, in ka badan 100,750,000 milyan oo xubnood oo ka mid ah dhagaystayaasha xayaysiiska Pinterest waxay ku sugan yihiin Maraykanka, taasoo ka dhigan in ka badan 50% wadarta dhagaystayaasha ay heli karaan xayaysiiyayaasha. Mareykanka waxaa ku xiga Germany, France, UK iyo Canada. Dalabkani isma bedelin ilaa sanadkii hore.
17. 6x ganacsiyo badan ayaa isticmaalay xayaysiisyada wax iibsiga ee Q4 2020
Pinterest ayaa soo warisay in "Dakhliga xayaysiiska wax iibsiga uu mar kale koray si ka dhakhso badan ganacsigeena guud waxaananu aragnay korodhka 6x ee tirada ganacsiyada isticmaalay qaabka xayaysiisyada wax iibsiga ee Q4 ."
Korodhkan ayaa u dhigma 85% ka-qaybgalka dheeraadka ah ee dhammaan goobaha wax iibsiga ee Pinterest intii u dhaxaysay Abriil iyo Oktoobar 2020.
Qaabka xayaysiiska wax iibsiga ayaa hadda kaliya laga heli karaa 28 wadan oo ku yaal Waqooyiga Ameerika iyo Yurub. Wax kala iibsiga ayaa ka mid ah mudnaanta istaraatiijiyadeed ee Pinterest ee 2021, marka filo in qaabku si ballaaran loo heli doono dhawaan.
18. Isbeddelka toddobaadlaha ah ee Pinterest ayaa koray by 300% sanadkii la soo dhaafay
Tirakoobka Pinterest wuxuu soo jeedinayaa in dadku aysan ku mashquulsanayn wax iibsiga, ay sidoo kale hubinayeen.
Intii u dhaxaysay Janaayo iyo Ogosto 2020, waxaa jiray 300% koror ku-kordhinta gaadhiga iyo hubinta beddelka loo aaneeyay
Maskaxda ku hay, Pinterest ayaa dhawaan soo bandhigtay astaamo kala duwan oo fududeeyay in wax laga iibsado goobta. Tirakoobyadu sidoo kale waxay la mid yihiin wareejinta masiibada horseedday ee tafaariiqda khadka tooska ah.
19. Pinners waa 70% ayuu u badan yahay si ay ula falgalaan calaamadaha alaabta ee muuqaalada
Xisaabtan Pinterest waxay khusaysaa haddii beddelka iyo iibku ay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatiijiyada suuqgeynta.
Dadku waxay door bidaan inay alaabtaada ku arkaan waxqabad marka loo eego tallaalada alaabta tooska ah. Sida laga soo xigtay Pinterest, ololayaasha tusaya qof isticmaalaya alaabtaada waxay u badan tahay inay wadaan iibka, sidoo kale.
20. Xayeysiisyada ururintu waxay wadaan a 6-18% korodhka guud ahaan cabbirka dambiisha
Xayeysiisyada ururintu waxay u oggolaataa suuq-geeyayaasha inay kor u qaadaan badeecooyin badan oo isku pin ah. Khibrada xayaysiisyada shaashada buuxda waxay soo bandhigaysaa muuqaal geesinimo iyo ilaa 24 biin oo sare ah.
La yaab ma leh, marka aad dadka tusto alaabooyin badan, waxaa jirta fursad sare oo ay wax badan ugu dari doonaan baabuurtooda.
21. Biinanka leh "cusub" ee qoraalka dulsaaran ayaa u horseedaya 9x ka sareeya baraarujin la caawiyo
Marka loo eego xogta Pinterest, dadku waxay ogaadaan marka arrimuhu "cusub" yihiin. Waxayna aad u xasuusan yihiin, sidoo kale. Markaa haddii aad bilaabayso wax cusub, ama cusub oo la hagaajiyay, iska hubi inaad ereyga ku darto.
22. Ku dhawaad ​​kala badh kharashaadka xayaysiiska ayaa la isticmaalay dalab toos ah Q4 2020
Pinterest ayaa soo bandhigtay dalab toos ah oo wax iibsiga ah Oktoobar 2020. Dhammaadka sanadka, taasi waa sida ku dhawaad ​​50% ee kharashaadka xayeysiiska lagu isticmaalo goobta lagu shubtay.
Pinterest waxa kale oo ay u sheegtay maalgashadayaasha in badi xayaysiiyayaasha isticmaalaya tartanka tooska ah ay kordhiyeen qoondaynta miisaaniyadooda goobta, taas oo soo jeedinaysa in habkani yahay mid wax ku ool ah.
23. 92% xayaysiiyayaasha Pinterest marka hore madal magac iyo sumcad ka dhig
Ra'yiururinta xayaysiiyayaasha Pinterest (oo ay samaysay Pinterest), 92% jawaab bixiyaasha ayaa Pinterest ka galay kaalinta kowaad ee sumcadda guud - oo ay ka horeeyaan sideed goobood oo hogaaminaya.
Hoggaanka Pinterest waxa uu leeyahay waa ay faa'iido leedahay in la noqdo mid togan. "Jawiga wanaagsani wuxuu kuu turjumayaa natiijooyin wanaagsan adiga - sababtoo ah dadku waxay u badan tahay inay dareemaan wanaag, xusuusta oo aaminaan calaamadaha ka muuqda meelo wanaagsan," ayuu yiri Jim Habig, Madaxa Suuqgeynta Ganacsiga Caalamiga ah, oo ku jira boostada blog.
Waqti u ilaali maaraynta joogitaanka Pinterest adiga oo isticmaalaya Hootsuite. Hal dashboard, waxaad ka curin kartaa, jadwal siin kartaa oo daabici kartaa biinanka, waxaad abuuri kartaa boodhadh cusub, Ku dheji boodhadh badan hal mar, oo aad ku socodsiin kartaa dhammaan muuqaallada kale ee warbaahinta bulshada. Isku day bilaash maanta.
Jadwalka biinanka oo la soco waxqabadkooda oo ay weheliyaan shabakadaha kale ee bulshada-dhammaan waxay ku yaalliin dashboard-ka si fudud loo isticmaali karo.
Isku day Hootsuite
Walmart waxay balaadhisaa Suuqa, Amazon caqabad ku ah